Umkhiqizi Ohamba Phambili We-Curtain Wall System ne-Factory | AmaMede
Abaklami abaningi banethemba lokuklama iwindi elikhulu njengodonga lwamakhethini. Lokhu kungumsuka walolu hlelo lwewindi!
Ukuphepha kwe-Ultra kuqinisekiswa ngobukhulu be-2.0mm wall, groove enelungelo lobunikazi enokukhiya kwamaphoyinti amaningi, ifreyimu ehambisanayo ye-sashand, kanye ne-120mm eqinisiwe ye-mullion njll.
Isikrini se-fly folding esifihliwe sihlangabezana nobuhle be-aesthetics nomsebenzi wokulwa nomiyane. Uhlelo oluhle lukhathalela yonke imininingwane!
UHLELO LWAMAKHOSI AMAKHOSI
Uhlelo lodonga lwamakhethini okuhlala i-MEDO lunothisa ulayini womkhiqizo wezicabha namawindi, lunikeza ngesixazululo sokwakheka okwengeziwe kwempilo yasekhaya. Izinto zesistimu ezintsha zisheshisa kakhulu ukucubungula i-workshop, okuvumela ukugeleza kokusebenza okusebenzayo. Kunezinhlobo eziningi zezinketho zohlelo lokusebenza ezitholakalayo: umphumela osobala kakhulu, ububanzi bobuso obubonakalayo nokusebenza okuqinile. Uhlelo olusha oluhlanganisa ibhande kanye nesakhiwo sokuthwala ludala umthelela omkhulu osobala kakhulu: iphaneli elungisiwe ne-panellook evulekayo efanayo kusukela ngaphandle, okungakaze kubonwe embonini yonke yokwakha.
IMEDO Residenceial Curtain Wall Systems inikezela ngezixazululo ezenziwe ngezifiso kuphrojekthi ngayinye nendawo yesiza ngasinye.
Isici sekhaya elibizayo
Uhlelo lokunamathisela kwamakhethini luphelele ekwakheni amakhaya ngokukhonjiswa kwengilazi enkulu, ukuphakama okuphelele kwezakhiwo kungayizuzisa kusuka phansi kuya engilazini engilazi ebanzi ezansi ezimbalwa ngisho nokuhlala i-angled ngqo ngaphansi kokhalo lwophahla.
Izinto Ezinhlobonhlobo Zengilazi
Idizayini yesakhiwo se-double-groove
Idizayini yesakhiwo se-groove ephindwe kabili ngohlelo lokukhiya umoya omncane womsebenzi wokungenisa umoya nokuphepha okwengeziwe.
Ingilazi emithathu enezikhala ezimbili
Izingilazi ezintathu ezinama-spacers amabili wokusebenza okuphezulu ekuvaleni umsindo nasekuhlanganisweni okushisayo. Umugqa omkhulu oshisayo wokusebenza okungcono kokushisa.
Uhlaka Flush futhi sash, uphawu high
Uhlaka Flush kanye sash
Ukuqina komoya kahle
Ukuqina kwamanzi okungajwayelekile
Uhlaka lwe-Flush nebhande elinombono ococekile nemfashini. Ama-gaskets ahlanganisiwe we-EPDM wokuqina komoya nokuqina kwamanzi.
Iphoyinti lokumelana nophahla nomgcini unikeza ukuphepha okwengeziwe futhi kuthuthukise ukusebenza kokumelana nomthwalo womoya ukuze kube nokuqina komoya okungcono nokuqina kwamanzi. Isibambo esingenasisekelo sinikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuphila ngokubukeka okuncane, ulayini obushelelezi wokusebenza, nokusebenza ngokuthula. Abasebenzisi bangaqiniseka ngokuphepha kwewindi noma ngabe badclimate ngokweqile ngedivayisi ephephile ehlulekayo.
Langaphambilini Uhlelo lwe-Bi Folding
Olandelayo: Slim Lift & Slide Uhlelo